Medium ajoina iro bandwagon uye anotangisa 'Series', chiono chayo cheSnapchat uye Instagram nyaya | IPhone nhau
Medium inotangisa yayo 'Nhau' nekuti takanga tisina kukwana
Kufanana nevamwe vanhu vazhinji, ndinoda kunyora paMedium. Uye ndinoda kunyora ipapo nekuti ndiyo chikuva chakakwanisa kuunza pamwechete kurerukirwa mukugadzira uye kushambadzira kwemavara nekuparadzirwa kwakakodzera mukati medunhu revaverengi. Kutsvaga nyaya nyowani, kudziverenga nekudzikurudzira zvinofadzawo nekuda kwechimiro chavanoratidzwa kwatiri. Zvisinei, nhau dzichangoburwa uye shanduko zvinopa zvakawanda zvekufunga nezve rako ramangwana.
Mavhiki mushure mekudzidza nezve kudzikiswa kwevashandi mukambani uye mushure kuvharwa kwenharaunda yeMedhi muSpanish -uyo anotarisira kurongedza zvemukati muSpanish uye nekupa kuoneka kukuru kumagwaro izvo zvino zvorasika-, iyo hombe kuvandudza munguva yakareba yasvika zvese zviri zviviri app uye newebhu vhezheni. Mariri, chimiro chakange chakaedzwa kwenguva yakati pakati pevashandisi vakasarudzwa uye icho chatove chinozivikanwa kwatiri tese chinoitwa kuruzhinji: pasi pezita rekuti 'Series', Medium inotisvitsa pfungwa yakaonekwa paSnapchat uye mumaapplication epaFacebook.
Medium Series inosvika pakududzirwa kwenyaya pfupi uye nekukurumidza kuti titore izvo zvataigona kutanga taona paSnapchat uyezve pa Instagram, Facebook kana WhatsApp. Imwezve nzvimbo kupi gadzira zvisingaremi zvemukati kuti utaure chimwe chinhu zvakanyanya kuratidzika kune zvakajairwa zvinyorwa pachikuva. Dambudziko guru pane izvi nderekuti vashandisi vari kutanga kuzadzwa nenyaya dzakawanda, hatigone - uye hatidi - kuziva imwezve sosi. Kune izvi tinofanirwa kuwedzera kuti Medium ine zvinyorwa zvakanaka zvakadaro uye nevanyori vakanaka kwazvo zvekuti pachave nezvikonzero zvishoma zvekushandisa nguva yedu tichiona idzi nyaya pane kuverenga chero dzadzo. Ini handipokane kuti iwo anonakidza kwazvo mafomu enhoroondo, asi kwete epuratifomu iyi.
Iyo nyowani ficha inouya kunonoka uye ine zvishoma zvinoyevedza sarudzo pane izvo zvinopihwa ne Instagram kana Snapchat, semuenzaniso, matinogona kudhirowa, kuwedzera mafirita kana kuisa 'zvitambi'. Hunhu hwemagariro hunonyangarika, sezvo isiri nyaya dzehama dzedu kana vatinozivana navo vatinozoona, kudzikisa kufarira uye kudyidzana, chimwe chinhu chakakosha mune izvi zvirimo. Medium haisi kuenda panguva yayo yakanakisa uye ini handizive kuti kiyi dzingave dzei kuwana chikuva chiri nani mune ramangwana, asi chandiri chokwadi ndechekuti izvi hazvipfuure nekuwedzeredzwa senge 'Series'.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Medium inotangisa yayo 'Nhau' nekuti takanga tisina kukwana
Iyo Sony Xperia XZ Premium yanga iri yakanakisa smartphone ye MWC 2017
Spotify inosvika makumi mashanu emamiriyoni ekushandisa